Imaaraadka Carabta oo wada qorsho milateri oo lagu qabsanayo Soomaalia. – Xeernews24
Imaaraadka Carabta oo wada qorsho milateri oo lagu qabsanayo Soomaalia.
12. Oktober 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Waxaa soo ifbaxaaya xogo la hubo oo muujinaaya in dowlada Imaaraadka Carabta soo afmeertay qorsho Militeri oo lagu qabsanaayo dalka Soomalaia.
Qorshahaan oo lagu dhameystiray shir ay isugu yimaadeen Khubaro Militery, Sirdoon iyo Madax ka tirsan Imaaraadka oo ka dhacay magaalada Shariqa ayaa waxaa lagu go’aamiyay in Militeriga Imaaraadka laga howlgaliyo dhammaan Gobolada dalka Soomaalia.
Shirkan oo ay goobjoog ka ahaayen qaar kamid ah xubnaha dowlada Imaaraadka uga howlgala Gobolada Soomaalia ayaa lagu go’aamiyay dhowr qodob oo suuragalinkarta in Soomaalia lagu geeyo ciidamo Militery oo xad dhaaf ah, iyadoo aan dareen gaara la galineynin dowlada Soomaalia iyo maamulada.
1-In marka hore si buuxda loola wareego dhammaan Dekadaha Soomaalia sida Dekadaha Puntland, Somaliland, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo ah kuwa ugu muhiimsan.
2-In ciidamada Militeriga Imaaraadka carabta la geeyo Dekadaha ay la wareegayaan iyadoo la adeegsanaayo dhanka badda.
5-In maamulada Soomaalia Heshiis lagula galo in tababaro joogta ah loo siinaayo ciidamadooda, si loo howlgaliyo Saldhigyada cusub ee Imaaraadku qorsheynaayo.
6-In ciidamada la dajiyo dhammaan xuduudaha ay wadaagan maamulada si loo ilaaliyo danaha fog ee uu Imaaraadka ka leeyahay dalka Soomaalia.
7-In la sameeyo Xerooyin lagu hayo dadka tabaaleysan si loo ballaadhiyo mashruuca Imaaraadka u dheereynkara joogitaankooda Soomaalia.
Waxaa kaloo la rajeynayaa in bilaha soo socda inay Milliteriga Imaaraadka isku faafiyaan xuduudaha kale ee Soomaalia.
Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay inay ka go’an tahay Istaraatijiyadda ay ku kireysanayaan Dekedaha kala duwan ee ku yaala Soomaalia, si ay dano dhaqaale iyo mid Milliteri ugu ilaashadaan danahooda, sida dhismaha haatan ku socda Dekedda Berbera ee W/Galbeed ee Soomaalia.
Dowlada Imaaraadka ayaa dhaqan galinta qorshaha cusub u adeegsaneysa guddi Khubaro ah oo loo xilsaaray dhameystirka maslaxada Imaaraadka ee Soomalaia.
Dhinaca kale, Dowlada Sacuudiga iyo Masar ayaa iyaguna xooga saaraya sida ay Soomaalia uga sameysan lahaayen Saldhig Militery, walow dowlada Soomaalia ay diiday in Masar ay dhul Militery ka hesho Soomaalia.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/top-secret.jpg 185 273 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-10-12 10:08:322017-10-12 10:08:32Imaaraadka Carabta oo wada qorsho milateri oo lagu qabsanayo Soomaalia.
DAAWO: Ciidamo laga keenayo Somaliland oo ka mid noqonaya DF. Sawiro: Soomaaliya oo 34 sano kadib soo ceshatay xuquuqda codeynta ee urur caalami...